DAAWO: Col, Caare oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Somaliland, kana jawaabay Dil Toogasho ah oo lagu xukumay.
August 25, 2019 NEWS 1
HARGEYSA(P-TIMES) – Taliyaha hogaamiya Jabhada ka soo horjeeda Ciidamada Somaliland ee Col, Caare ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrimaha ku aadan hadal kasoo yeeray Taliyaha ciidamada guud ee Somaliland Nuux Taani Ismaaciil oo uu ku sheegay in uu Caare dil kuxukuman yahay.
Taliyaha ciidamada gadoodsan ayaa sheegay in ay been abuur tahay eedaha u soo jeediyey taliyihiisii ciidamada Jen, Nuux Taani, wuxuuna sheegay in ficilada Taani ay yihiin kuwa kala dhantaalay ciidamada maamulka Somaliland.
Col, Caare oo la hadlayay mid kamid ah warbaahinta gudaha ayaa cadeeyey in dhankiisa ay nabad raadiyeen oo ay aqbaleen dalab uga imaanayay Odayaasha dhaqanka, balse wuxuu ku eedeeyey Dhinaca Madaxtooyada Somaliland in ay abaabulayso shirqoolo ay doonaysay in ay ku qabato.
Taliyaha ciidamada Somaliland Jen, Nuux Taani Ismaaciil ayaa saacado ka hor sheegay in Col, Caare yahay dambiile Qaran oo ay tahay in la toogto, isagoo sheegay in cid kasta oo ka hortimaada Somaliland ay tahay marxalad aan sax aheyn.